Kedu ihe eji agagharị igwe eji eme njem? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Touring igwe kwụ otu ebe - ngwọta na-adịgide adịgide
Touring igwe kwụ otu ebe - ngwọta na-adịgide adịgide
Kedu ihe eji agagharị igwe eji eme njem?
Ejiriọzọ maka n'okporo ụzọ dị larịị, n'ịgba ọsọ na ntụrụndụ ụbọchị. Mgbe aịgagharị igwe kwụ otu ebeewuru maka ike, nkasi obi na nkwụsi ike. Dị ka ndị aanyịnya igweA na-eche na ha ga-ebu ibu dị arọ karị naanị onye na-agba ya. Ruo ọtụtụ ụbọchị, ọnwa ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ afọ na njedebe.Ọnwa Ise 20, 2019
Kedu ka igwe kwụ ebe azụ si dị iche na igwe kwụ otu ebe? Ọ bụ naanị ndị akpa ma ọ bụ na e nwere ihe pụrụ iche banyere okpokolo agba onwe ha? M nwere ike ugbua na-eche na keyboard dike na-agwa m na ị nwere ike ịga njem ma ọ bụ azu paaki na igwe kwụ otu ebe ọ bụla. Ọfọn, nke ahụ bụ 100% eziokwu, mana ọ pụtaghị na anyị ekwesịghị ịkwalite igwe kwụ otu ebe maka ebumnuche anyị. Ka emechara, i nwere ike ịnya ụgbọ ala gburugburu ụwa, ma ọ bụ n'ezie ụgbọ ala kachasị mma maka ọrụ ahụ? Isiokwu a na-enye nkọwa zuru ezu banyere ịnwe ịnyịnya ígwè asatọ na-amata ọdịiche dị n'etiti igwegharị na njegharị.
Ma nke a bụ nchịkọta gị dị nkenke. Nọmba otu: Anaghị arụcha igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe. Ezubere igwe kwụ otu ebe na - ebu oke ibu.
Usoro nyocha nke nchekwa maka ọtụtụ njegharị na ngwongwo ngwongwo na-adịkarị ihe dị ka kilogram 130 nke onye na-agba na gia, mana ule nchekwa a na-eweta ala, ọ bụghị ụlọ. Ọ bụ ezie na a na-edebe igwe kwụ otu ebe na obere, a na-ahazi igwe kwụ otu ebe maka oke ibu - ọbụlagodi na onye nrụpụta ekwupụtaghị ya ebe ọ bụla. Agbanyeghị, n'oge na-adịghị anya, anyị ga-ahụ ịnyagharị igwegharị na-akpọsa ọkwa kachasị elu dị ka ụlọ ọrụ nyocha igwe kwụ otu ebe na-enye asambodo ruo 180 n'arọ.
Ọ bụghị naanị na onye na-ese igwe ga - eji aka ya rụọ ihe maka ihe kachasị atụ anya nke ndị ahịa ya, kamakwa jiri nwayọ họrọ ihe ndị na - agaghị emebi. Ebe ọ bụ na wiil ndị ahụ nwere ike ịdaba na njem na-agagharị agagharị, ị ga-ahụkarị uwe ndị siri ike na ọnụ ọgụgụ dị elu karịa na igwe eji ebu igwe. Uzo ojoo nke igwe eji ekpuchi ekpuchi bu na o kariri.
Imirikiti igwe kwụ otu ebe na azụ dị na kilogram 10 ruo 14, ebe ụdị igwe kwụ otu ebe dị oke ọnụ na-atụle kilogram 14 ruo 17. Ọ dị mma ịmara na ihe ndị mejupụtara igwe kwụ otu ebe gị achọghị ịma ma ị buru kilogram 50 ma buru kilogram 40 ibu, ma ọ bụ buru ibu kilogram 80 wee buru 10. Mana, ọnọdụ nke ibu ahụ na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na akụrụngwa na-ebu nnukwu ibu, etiti ahụ ga-adịkwa ike. Number abụọ: Bikepacking igwe kwụ otu ebe na-enwekarị a ala etiti isi. Uwe siri ike na-ejikọkarị ya na igwe kwụ otu ebe.
Igwe elu na tube dị ala bụ tubes dịkarịsịrị mkpa dị ka ha bụ ọkara nke nwere ike iguzogide ọtụtụ ikike torsional n'etiti akpa na azụ akpa. Uringgagharị igwe kwụ otu ebe na-ejikarị ọkpọkọ nwere nnukwu dayameta na mgbidi kachasị. Ebe ọ bụ na ibu dị n'ụgbọ ịnyịnya ígwè pere mpe, ndị na-esepụta okpokoro nwere ike ịpụ maka ọkpọkọ ọkpọkọ na-esighi ike mana na-ebute ọfụma ịnyagharị mgbe ị na-agagharị n'ejighị akpa.
Ejiri m ibi ndụ dị ka okirikiri nke nwere ihu ọhụụ mana ọ pere mpe. Iji bulie ịdị ndụ nke igwe kwụ otu ebe, a ghaghị iburu ụzọ onye na-agba ịnyịnya, arụmọrụ ya na ibu ya n'uche. Ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume na-ewu a nippy igwe kwụ otu ebe na-bụ stiif zuru ezu na-ebu a arọ n'ihu na azụ ibu.
Agbanyeghị, ịnwere ike iji ọkụ dị mfe ma buru naanị ibu n'otu isi, ma ọ bụ ịnwere ike ibufe gia gị na ụgbọala na-adọkpụ kama. Iberi igwe ịnyịnya ibu nwekwara ike ịdị arọ nke ukwuu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere zụrụ nri na galọn mmiri iri so gị otu izu. Mgbe ị na-agba n'ụzọ dị otú a, ịchọrọ ijide n'aka na igwe eji agba ịnyịnya ígwè gị siri ike dị ka igwe kwụ otu ebe.
Number atọ: Bikepacking igwe kwụ otu ebe nwere dị iche iche mounts. The mounts na-adịkarị iche n'etiti touring na backpacking anyịnya igwe, ma edoghi na-mara blurry ụbọchị ndị a. Togba ígwè na-agagharị agagharị na-enwekarị ogbe na ihe ndozi, ebe ọ bụ naanị mgbe ụfọdụ ka ịnwe igwe kwụ otu ebe nwere ha.
abụba taya eletriki igwe eletrik
A bikepacking igwe kwụ otu ebe fọrọ nke nta mgbe niile nwere ole na ole ogbe mounts, a touring bike anaghị. Tụkwasị na nke a, ịnyịnya ígwè na-agba ịnyịnya ígwè nwere ike ịnwe nkwanye ugwu maka ngwugwu ngwugwu kwụ ọtọ na obere akpa akpa, yana oge ụfọdụ na-anọkwasị n'oche oche na ebe ịnọ. Chọta ugwu dị n’elu igbe azụ bụ ezigbo obere, mana nke ahụ dị mma - ọ dị mfe ịdabere na igwe kwụ otu ebe na mpempe akwụkwọ ịnyịnya ibu.
Igwe kwụ otu ebe na panniers anaghị agha nke ọma, yabụ ọ na-adịkarị karịa ịnyagharị igwe kwụ otu ebe. Nọmba nke anọ: Igba ịnyịnya ígwè na-agba ọsọ ọsọ nwere obere usoro. Otu ịgagharị igwe kwụ otu ebe nwere ogologo ogologo usoro ihe atọ.
Otu onye, ​​enwerekarị mgbagha dị ukwuu na azụ n'ihi akpa ọdụ dị ukwuu, na ogologo usoro ogologo na-enyere aka ịgbanwe etiti ike ndọda na-aga n'ihu. Nọmba abụọ: site na ịgbatị ọdụ ụgbọ ụkwụ, ị ga-enweta mbuli elu na nkwụsi ike na nnukwu ọsọ. Ma ọnụọgụ atọ: Ka ikiri ụkwụ gị wee ghara ịdaba na panniers mgbe ị na-anya ụgbọ ala.
N'iji ya tụnyere, igwe kwụ otu ebe na-enwekarị 20-30 millimeters mkpumkpu ogologo oge n'ihi atụmatụ akpa dị iche iche na ibu dị ala a na-atụ anya ya; pgba ịnyịnya ígwè agaghị enwe nsogbu ọ bụla na iku ụkwụ n'ikiri ụkwụ ma ọ bụ nkwụsi ike ịnya ịnyịnya. Chainzọ usoro dị mkpụmkpụ dị mkpụmkpụ na-eme ka igwe kwụ otu ebe nwee mmetụta nke imegharị na ọ ga-adịkwa mfe iweli wiil ihu n’ihu n’ihe mgbochi. Ọ bụrụ na ị nụtụla ka ndị mmadụ na-ekwu na obere ọdụdụ na-eme ka igwe kwụ otu ebe mee ngwa ngwa, ọ nwere ike ịbụ eziokwu ma ọ bụrụ na ịchekwa obere gram site na etiti ahụ, mana n'ozuzu ọ bụ nkwupụta nzuzu mara mma.
Nọmba nke ise: A na-echekarị igwe kwụ otu ebe maka ụzọ n'okporo ụzọ. Nlele ngwa ngwa site na edemede di na Bikepacking Bike Buyer's Guide na ọ bịara doo anya na e wuru igwe ndị a maka ụzọ dịpụrụ adịpụ. Ana m ekewa igwe kwụ otu ebe na-adabere na nkọwapụta wiilị n'ihi na nke a bụ isi ihe dị mkpa n'ịchọpụta ikike igwe kwụ otu ebe na-arụ.
Agbanyeghị, enwere ike ịme igwe anyịnya igwe puru iche maka ụzọ - ọtụtụ igwe elekere gravel na akwụkwọ m bụ naanị igwe kwụ n'okporo ụzọ, nke mere ha nhọrọ kachasị ọsọ maka njem dị mfe. N'iji ya tụnyere, a na-eme njem nlegharị anya igwegharịrị na mbara ala dị iche iche, nke mere na ụdị njikwa na-abụkarị ebe kachasị mma maka ịhọrọ igwegharị njem. E nwere ọtụtụ overlap n'etiti anyịnya igwe! A na-egosipụtakarị ụgbọ ịnyịnya na-arụsi ọrụ ike na akwụkwọ m abụọ, ma mgbe anyịnya igwe gravel nwere ebe a na-egwu mmiri na apịtị apịtị, a na-ahụkarị ha na ngalaba 'njegharị ọkụ' nke akwụkwọ m na-agagharị.
Number isii: Bikepacking igwe kwụ otu ebe mgbe ụfọdụ nwere elu pitch ruru. Bikegba ígwè na-agagharị agagharị kwesịrị ịnwe igwe mgbago elu nke dị sentimita 20 ma ọ bụ obere. Bikegba ịnyịnya ígwè nwere ike iburu ihe na-arịgo elu dị elu n'ihi na ị nwere ike iburu obere ibu.
Otú ọ dị, igwe kwụ otu ebe na-elekwasịkarị anya na njem ndị na-abụghị n'okporo ụzọ, ebe ebe ndị ahụ na-adịkarị elu ma na-amị amị. N'ihi ya, igwe kwụ otu ebe kachasị mma nwere otu ihe na-arị elu dị ka igwe kwụ otu ebe, na mgbe ụfọdụ obere. Number asaa: Bikepacking igwe kwụ otu ebe na-eji 1X draịva ọzọ.
Na ọtụtụ nke bikepacking bike ige m akwụkwọ, 1X drivetrain bụ maa ndị kasị ewu ewu na nhọrọ! Ihe ndi ozo di iche iche bu 700c gravel igwe, nke a na-ewukwakarị na-agba n'okporo uzo - ma, nke oma, 29-inch-off-road bikes. Xgbọ okporo ígwè 1X na-enye mwepụ taya karịa na ụzọ dị mkpirikpi ka e jiri ya tụnyere usoro mbido derailleur. Ọ bụ ezie na ha nwere nnukwu jia elu n'etiti gia, ịkwesighi ime mgbanwe ọ bụla na mbara ala dị ka ị ga-eme n'okporo ụzọ.
Nọmba nke asatọ: Igwe igwe kwụ otu ebe na - eji igwe ọrụ dị ole na ole. Oge a na-atụ anya nke njem ịgba ịnyịnya ígwè na-adịkarị mkpụmkpụ karịa njem njegharị. Nke a na-apụtakarị itinyekwu oge na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe.
Ọ bụrụ na ihe agahie, ịnwere ike izipu akụkụ maka akwụkwọ ikike, nweta akụkụ ndị ọzọ, ma ọ bụ nweta ndozi ọkachamara. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị brackets na-agbada, njigide nkwanye, hydraulic brakes, ndị na-agbanwe agbanwe, na titanium ma ọ bụ eriri carbon na igwe kwụ otu ebe, mana ndị a bụ ndị a na-ahụkarị na igwegharị njem pụrụ iche. A na-ejikarị akụkụ dị mfe nke na-agagharị agagharị na-achọ ihe ndị bụ isi dị na ụlọ ahịa gburugburu ụwa.
Otú ọ dị, akụkụ ndị ọzọ dị mgbagwoju anya dị ka ihe mgbagwoju anya na ihe mgbochi hydraulic egosiwo na a ga-atụkwasị obi na afọ ndị na-adịbeghị anya na igwe kwụ otu ebe n'ime ọtụtụ afọ na-esote. Yabụ enwere ike ịmebe igwe kwụ otu ebe maka ịgba ịnyịnya na ịgagharị? Kpamkpam. Co-op Cycles ADV 4.2 bụ ezigbo ihe atụ.
Igwe igwe kwụ otu ebe na - eji ihe eji eme ihe emebere ka ọ dị mfe. Ọ nwere oke ala oke, dị n'okporo ụzọ ma nwee ndokwa maka ịgagharị ihe na mudguards ma ọ bụ akpa akpa akpa. Ọrụ ọrụ ahụ siri ike ma nwee ike ịmata site na kilogram 16.
Geometry okirikiri dị nso na igwe eji agagharị agagharị nwere ogologo ọdụdụ na aka ndị kwụ ọtọ. Nwere ike idozi igwe kwụ otu ebe na ndị na-eme njem maka ogologo njem ma ọ bụ nke ọzọ dị ka ntọala na-agba ọsọ na ngwa ngwa. Kedu igwe kwụ otu ebe ka ị kwesịrị ịga? Aghaghị m ikwugharị - ị nwere ike iji igwe kwụ otu ebe maka ịgagharị na ngwugwu! Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwalite ntọala gị, ikwesiri iburu ibu gị n'uche, ala a ga-ebugharị, nkpoda nke mbara ala ahụ, nhazi akpa achọrọ yana ma ị nwere akụkụ mapụtara ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ngwa ọrụ kwesịrị ekwesị.
Ngwakọ ngwungwu a na-agagharị agagharị na-agagharị agagharị bụ igwe kwụpụrụ onwe ya n'okporo ụzọ nwere mmetụ taya na-emesapụ aka na nkwanye maka ihe mgbochi akpa, mudguards na akpa akpa akpa. Ọ bụrụ n'ịchọ edemede m, ị nwere ike ịkwado ha site na ịnweta otu akwụkwọ m, ị nwere ike isonye na Patreon m ebe m na-enye ụgwọ ọrụ, ma ọ bụ ị nwere ike inyere m aka ịkwalite YouTube algorithm site na ịmasị na ịdenye aha ha!
Gịnị bụ ezigbo njegharị igwe kwụ otu ebe?
10 dị egwuNjegharị Bikesmaka Ọdịnihu Gị Ọzọ
Kacha mmaUru. 520 Disc. 520 trekbikes.com. $ 1,679.99.
Oge na-adịghị agafe agafe. Ogwe Ndenye Marrakesh. salsa salsacycles.com.
Omuma, Emelitere. Disk Trucker. surly surmybikes.com.
Kacha mmaMaka Ogologo Ogologo. AWOL Ọkachamara. specialized specialized.com.
Ọtụtụ vasatail. RLT 9 ígwè. niner ninerbikes.com.
Ọnwa Ise 21, 2020
Kedu ihe dị iche n'etiti igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe?
Uringgagharị igwe kwụ otu ebe
Ezubere maka ogologo oge naokporo ụzọ, ha siri ike karị version nkeokporo ụzọ,na aezumike ezumike karị. Ndị njem na-ebukwa ibu buru ibu, nwere okpokolo agba siri ike, isi ihe abụọ maka racks na taya dị obosara iji hụ na njem siri ike.
Enwere ike iji igwe kwụ otu ebe pụọ n'okporo ụzọ?
Ndepụta zuru ezu nke ígwè siri ikeGbanyụọ-Okporo Tozọ Njegharị(Na gbakwunyere Taya) Ọbụghị naanị ndị aanyịnya igweebumpụta ụwa dị mfe, siri ike, ma dịkwa mfe ilekọta, mana ha nwere ikike, nwee obi ike na nkasi obigbanyụọ-okporo ụzọndị nyocha.Ọnwa Ise 31, 2019
Dezie: The troll adịghị njikere maka eriri ụgbọala na-enweghị mgbanwe
Gịnị mere njegharị anyịnya igwe ji dị oke ọnụ?
Uringgagharị igwe kwụ otu ebebụ ndị ọzọdị oke ọnụn'ihi na e mepụtara ha n'ụzọ dị iche iche iji kwado ibu dị arọ na ígwè ma ọ bụ titanium ma buru ibu 26 na 28-inch wiil iji kpuchie anya. buy zụta angagharịigwe kwụ otu ebeya mereị pụrụ ịnụ ụtọ ogologo agafe na-akwụ ụgwọỌzọkwantakịrị nwere ike inye gị igwe kwụ otu ebe na-anaghị atụ otu.
Togba ígwè na-agagharị agagharị nwere gia?
Ihetouring bike gearing nwereọnụọgụ dị ukwuu karịa nke okporo ụzọ setịpụrụ dịka ọ na-agụnye usoro dị ala karịaKwadobeịnagide ọtụtụ teren na anjegharị. Yabụ enwere njedebe dị ala ịnagide ugwu nta kamakwa ọ nwere njedebe dị elu iji nye gị ọsọ ọsọ dị elu na ụlọ elu ịchọrọ.
Bikezọ ụgbọ ala dị ọsọ karịa igwe eji agagharị?
Otu n'ime ihe ndị kachasị kpatara yaokporo ụzọ anyịnya igwegaa nke ukwuungwa ngwa karịa ịgagharị igwe kwụ otu ebebu uzo ikuku di elu nke ha na agba ume. Site dochie a ewepụghị handlebar na dobe Ogwe, i nwere ike inye onwe gị nhọrọ iche na aero-ike ọnọdụ na gị tourer.
Ndi igwe njegharị na-agagharị ọnụ dị oke ọnụ?
Agbakwunyere nkasi obi na sturdiness na-efu ihe.Uringgagharị igwe kwụ otu ebebụ ndị ọzọdị oke ọnụn'ihi na e mepụtara ha n'ụzọ dị iche iche iji kwado ibu dị arọ na ígwè ma ọ bụ titanium ma buru ibu 26 na 28-inch wiil iji kpuchie anya.Uringgagharị igwe kwụ otu ebedịdị oke ọnụna kwesịrị ya kwa.
Gịnị na-eme igwe kwụ otu ebe bụ igwe njegharị?
Uringgagharị ịnyịnya ígwè, n'ozuzu, ga-enwe ogologo ọdụdụ, nwere ohere dị anya n'etiti wiilị na-aga n'ihu na azụ maka ịbawanyewanyewanye ike, na mgbe mgbe, pedal (yabụ sadulu) ga-adị ntakịrị ala, na -emepụta etiti dị elu - na-erughị manoeuvrable na ntụpọ siri ike, mana na-emesi obi ike naBọchị 4, 2015
Ego ole ka njegharị ịgagharị agagharị kwesịrị inwe?
Na mgbakwunye, azụ azụ ma ọ bụ kaseti nwere ike ịbụ 7, 8, 9, na 10 ọsọ iji nye gị ihe dị iche iche 30Kwadobena derailleurigwe. Otú ọ dị, ọtụtụngagharịna ugwuigwejiri a 'Mmaji Atọ' n'ihu crankset na 8 ma ọ bụ 9 n'azụ cogs na-enye gị 24 na 27 dị iche icheilegharị anya ịnyagharị igwe.
Kedu ihe na-eme igwe kwụ otu ebe ka ọ bụrụ ezigbo igwe njegharị?
Bikes emere maka njegharị na-adịkarị nnabata ma nwee ahụ iru ala karịa ogologo oge, na-agụnyekarị pannier rack (s) na mudguards, ntụsara ahụ dị jụụ, na ọtụtụ usoro. Igwe dị elu dị elu na-abụkarịkwa maka ihu igwe dị iche iche, n'ihi na ị maghị ebe ị ga-akwụsị.
Kedu ihe dị iche na etiti njem na njem njem?
Esgba ígwè njem nlegharị anya nwere ike ịnwe ma ọ bụ mpempe akwụkwọ. Adventure anyịnya igwe na-wuru blur ahịrị n'etiti igwe kwụ otu ebe na n'okporo ụzọ anyịnya igwe. Ha hụrụ pavụ n'anya, ha hụrụ gravel n'anya, ha hụrụ unyi n'anya, nke ahụ dịkwa mma n'ihi na ị nwere ike ihu mpaghara ndị ahụ niile n'oge njem gị.
You chọrọ igwe kwụ otu ebe maka ịgagharị?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem njem ọtụtụ ụbọchị site na igwe kwụ otu ebe ma nwee ike ịme njem ruo ogologo ụkwụ gị nwere ike iburu gị, buru ihe niile ịchọrọ maka njem ahụ, mgbe ahụ, ịnyagharị ịnyagharị nwere ike ịdị na ndepụta akụrụngwa gị. Ozi ọma maka ịgagharị ndị na-agba ịnyịnya ígwè bụ na igwe igwe kwụ otu ebe enwere maka igbo mkpa ha amụbaala nke ukwuu n'ime afọ ole na ole gara aga.